About us - Shanghai Langyi Functional Izinto Co., Ltd.
I-Shanghai langyi functional materials Co., Ltd. yasungulwa ngo-2010, igxile ekunikezeni izixazululo ezikhethekile ezisebenzayo zezisombululo zezinto ze-polymer ezisuselwa ku-ester, nokuhlinzeka ngokuqhubekayo izinsizakalo zokuhlukanisa ukusebenza komjikelezo wokuphila kwamakhasimende ku-ester-based polymer industry chain.
ULangyi uthatha "ubuchwepheshe obusha" njengesisekelo sokuthuthuka kwebhizinisi, akhuthaze ukuqondiswa kwezigwegwe ezinhlobonhlobo zokuqamba okuphelele. Ngokubambisana namanyuvesi adumile njengeyunivesithi yaseFudan neyunivesithi yase-donghua, imali engaphezulu kwe-10% yonyaka ye-langyi isetshenzisiwe ocwaningweni nasekuthuthukisweni ukwakha ithimba le-R & D eliqinile, ngaphezulu kwamalungu angama-85% anama-bachelor degrees noma ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwamalungu angama-80% ama-R & D ayisisekelo aneziqu zobudokotela noma ze-master. Le nkampani inamalungelo obunikazi bokusungula okugunyaziwe ali-11, futhi ifaka isicelo samalungelo obunikazi angaphezu kwama-20.
Imikhiqizo yethu ikakhulukazi ifaka uchungechunge olu-5: Ama-ejenti wokuxhumanisa athinta imvelo ahambisana ne-carModi® CA, ama-anti-hydrolysis anezithasiselo ze-HyMax®, i-AntibacMaxTM i-inorganic metal ion elwa namagciwane kanye ne-anti-virus izithasiselo, i-AntibariMaxTM izinto zokuvimbela i-infrared, i-AntistaMaxTM izithasiselo ezisebenza isikhathi eside.
UKUNIKEZA IZINSOMBULULO ZABASEBENZI BEZIMBONI NGEZINSOMBULULO NGOKWEZINTO EZIKHETHEKILE ZOKUSEBENZA KANYE NOKUTHUTHUKISA UKUVUMELANA KOMPHAKATHI NOKUTHUTHUKELA KWENKULUNGWANE YABANTU
Ukuhlonishwa kanye nokuQinisekiswa
Ibhizinisi elisha lobuchwepheshe obuphakeme
Iphrojekthi yokuguqulwa kwezinguquko ze-Shanghai High-tech
Amaphrojekthi we-Shanghai Top 100 wokuguqulwa kwezimpumelelo ezintsha neziphakeme
IShanghai Advanced Enterprise
IShanghai iqhubele phambili ibhizinisi elizimele
Iqembu elihle kakhulu esifundeni saseSongjiang
Ibhizinisi lokubonisa lobunikazi beSingjiang District
Umklomelo wesithathu weNqubekela phambili yeSayensi neThekhinoloji yesiFunda iSongjiang, eShanghai
Kubukwe kabusha iRed Army Road - iNanhu Revolutionary Memorial Hall
Isakhiwo Team at Qingdao ngasolwandle
Iya ku-K Exhibition 2019 eJalimane
Iya ku-Paint Fair ka-2019
Antibacterial Indwangu Nonwoven, Elwa namagciwane Electret Masterbatch, Intambo elwa namagciwane, I-Masterbatch elwa namagciwane, I-Masterbatch Yokuqothula Elwa Namagciwane, Umenzeli wePolymeric Antihydrolysis,